China Aluminium Plastic Film ifektri abakhiqizi | Yongjie
Ingxubevange Main: 8021
Ukusetshenziswa komkhiqizo: Iphakethe Lebhethri
Kukhona uchungechunge oluphelele lokucubungula i-aluminium kusuka kuma-aluminium ingots kuya kumikhiqizo eqediwe, futhi yonke inqubo isuka kuma-aluminium ingots kuya kumikhiqizo eqediwe ilawulwa.
2.Esigabeni sokuqala sokukhiqizwa kwefilimu ye-aluminium, inani elikhulu lokwakhiwa kwamakhaza selikhiqiziwe, futhi izici ze-8021 alloy ziyaqondakala.
Imikhiqizo yefilimu ye-Aluminium-plastic ifakiwe ekwakhiweni kwemikhiqizo emisha, futhi inezinto ezithile ezihola phambili ezimbonini ezinjengemiqulu yaseJalimane neyesiSlovenia, amasondo okugaya angeniswe evela eJapan, nokuhlolwa kwephayiphu okuvela eSouth Korea.
I-Hot rolling-Cold rolling-Annealing-Cleaning-Foil casting-slitting -Annealing-Ukupakisha
Ucwecwe lwe-aluminium engu-8021 yinto esemqoka esetshenziswe kupakethe yebhethri. Ine-opacity enhle nobufakazi obunamandla bomswakama namandla okuvimba. Ucwecwe lwama-aluminium angama-8021 alunabo ubuthi futhi alunamakha. I-alloy foil alloy engu-8021 isetshenziswa kabanzi njengezinto zokupakisha ngemuva kokuhlanganiswa kabusha, ukuphrinta nokunamathisela. Ingxubevange 8021 ingacutshungulwa ebangeni lokulinganisa eziningi ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Izici ze-8021 Aluminium Foil: I-foil foil engu-8021 ayibizi, ihlala isikhathi eside, ayinabuthi futhi ayinawo amafutha. Ngaphezu kwalokho, iyamelana nokuhlaselwa ngamakhemikhali futhi ihlinzeka ngokuvikela okuhle kakhulu kagesi nangaphandle kwamandla kazibuthe. Ucwecwe olwakha amakhaza lungamelana ngokuphelele nomhwamuko, i-oksijeni ngokusebenza okuhle kwephunga lesithiyo. I-8021 aluminium alloy iqinisekisa ukusebenza okungcono kwezicelo ezinjengokufakwa kwezemithi, ukufakwa kwe-elekthronikhi, igobolondo lebhethri nakho konke okudinga ukusebenza kwesithiyo.
I-Battery pack foil 8021 ingxubevange eyenziwe nge-pure, aluminium base foil ethanjiswe ngezinto ezengeziwe. Imvamisa phakathi kuka-0.035 no-0.06 mm ubukhulu, i-8021 aluminium foil ikhiqizwa ngobubanzi namandla amaningi.
Ama-tempers asetshenziswa kakhulu ku-8021 aluminium foil afaka phakathi i-H14, H18, H22, H24 kanye ne-O. Mill eqedile ucwecwe lwe-aluminium njengefoyile yegobolondo yebhethri, ucwecwe lwemithi luyatholakala kithi.
Olandelayo: Izinto zokuhambisa uhlelo lokushisa ezishisayo